Umthandazo weshishini. ? Umsebenzi kunye nentabalala | Ongcwele uJude Thaddeus
Umthandazo kwishishini el mundo Okwasemoyeni kuyinyani esingenakuphuncuka okanye ukungahoyi, yiyo loo nto xa siqala into entsha kulungile ukwenza ukuthandazela ishishini Ngoku siza kuqala
Ukuba ishishini elisikelelekileyo, ukuze amandla amnandi ahamba ngawo onke amaxesha. Singacela ukuchuma kwaye ukuba wonke umntu ongena kushishino lethu uluva uxolo noxolo.
Thandazela ukuba ishishini linganyanzelekanga ukuba libekho xa liqala, singathandazela amashishini esele enexesha lokuhamba.
Into ebalulekileyo kukusikelela egameni likaYise, lo Nyana kunye noMoya oyiNgcwele kwaye sikholelwe ukuba umthandazo esiwenzayo unamandla.
Kwezo meko apho ishishini ingeyoyethu kodwa lisuka kumhlobo okanye kwilungu losapho, sinokuthi sithandazele ukuba lelo shishini lisikelelwe kwaye liphumelele kakhulu.
1 Umthandazo kwishishini lilungiselelwe ntoni?
1.1 Umthandazo wokusikelela ishishini
1.2 Umsebenzi kunye nobuninzi beshishini
1.3 Umthandazo kuSt. UJude Thaddeus kwezeshishini
Umthandazo kwishishini lilungiselelwe ntoni?
Ukuthandazela ishishini kubalulekile kuba ngayo sinokufumana indlela ekufuneka ithathe ishishini, khumbula ukuba amaxesha amaninzi sifuna ukwenza into enye xa kufuneka senze into eyahlukileyo kakhulu kwaye oku kuxa ngomthandazo singafumana idilesi esiyifunayo ukuthatha izigqibo ezilungileyo uhambe ngendlela eyiyo.
Sikulungele ngokwasemoyeni ukunxibelelana noThixo kunye nabangcwele, asinakulinda omnye ukuba eze kusikelela into yethu, ewe, sinokuxhomekeka kumhlobo okanye kwilungu losapho kodwa uxanduva lokomoya lolwabantu, ke kufuneka sifunde ukuthemba Umthandazo wethu
Asinakho ukucela ukuchuma kwezemali ukuba asikholelwa ukuba sinokulufikelela, ngaphezulu kokufunda ukuthandaza.
Kufuneka sibe nokholo lokuba umthandazo esiwenzayo uyakufikelela ezulwini kwaye uya kuyifezekisa injongo esiyicelayo.
Lindela impendulo evela kuthi imithandazo inokuba yeyona nto inzima kodwa Ukuba siyathemba, ngokuqinisekileyo kuyakuthatha oko sikucelayo kangaka ukuba sifike.
Umthandazo wokusikelela ishishini
Nkosi ethandekayo, ndicela uncedo lwakho ukuqala ishishini lam. Ungoyena mhlobo wam uqinileyo kunye neqabane lam.
Ndicela undijoyine kule adventure intsha ukuze ndiphumelele. Mna, usapho lwam kunye nabaxumi endiza kubasebenzela. Ndinike amandla akho okugweba okuhle.
Ubulumko bakho kunye nesikhokelo kwishishini lam ukuba liphumelele kwaye lenze into elungileyo. Sonke sikwigama lakho lasezulwini.
Ubuninzi, ukutyibilika, isikhokelo sokwenza izigqibo, imibono emitsha kunye nezinye izicelo ezininzi esingazibeka phambi koThixo onokwenza yonke into ukusinika uncedo.
Akukho mntu wazi bhetele kunawe iimfuno ezinokuthi zivele kwishishini lakho, thetha noThixo kwaye uzise nganye yazo kuye.
Khumbula ukuba ukuthandaza kukuthetha noThixo, ke thetha naye kwaye ungalibali ukumnika ixesha lokuphendula, ukuhambisa iziqwenga kukuthanda.
Ayizizo zonke izinto ezizakwenzeka ngendlela esifuna ukuba zenzeke ngayo, kodwa ukuba siyayithemba iNkosi, siqinisekile ukuba nantoni na eyenzekayo iya kuba yintsikelelo yethu.
Umsebenzi kunye nobuninzi beshishini
Nkosi ethandekayo, ndicela uncedo lwakho ukuqala ishishini lam. Ungoyena mhlobo wam uqinileyo kunye neqabane lam. Ndicela undijoyine kule adventure intsha ukuze ndiphumelele.
Mna, usapho lwam kunye nabaxumi endiza kubasebenzela. Ndinike amandla akho okugweba okuhle.
Abantu abaninzi qala ishishini elitsha kwaye bafuna ukonwabela ubutyebi bengazi ukuba buza ngokuthe ngcembe ngelixa sisebenza.
Ke ngoko ukucela ubutyebi ngaphandle kokusebenza ndicela ngaphandle. Ibhayibhile isifundisa ukuba ukholo ngaphandle komsebenzi lufile, ke kufuneka sicele uThixo ukuba asinike into eninzi, kodwa asisebenzele ukuze siyifikelele.
Kufuneka sifunde ukwenza izivakalisi ngokuchanekileyo, asinakucela into esingayifuni ncam, sicela izinto ezixabisekileyo kodwa hayi kwezoqoqosho.
Umzekelo ubulumko, ngayo singafezekisa okuninzi.
Umthandazo kuSt. UJude Thaddeus kwezeshishini
Ongcwele uJude Thaddeus,
Okwalo mzuzu sicela ukuba uthethele phambi koBawo wethu waseZulwini,
Ukuphucula ishishini lethu,
Umthombo wokusebenzela uninzi nokutya kwiintsapho zethu,
Gubungela yonke ikona yeentsikelelo,
Kwaye kubo bonke abo basebenza kuyo,
Ukuze umsebenzi wethu usikelelwe ngOsenyangweni,
Kwaye ube mnandi emehlweni akhe.
Sukuvumela ngaphakathi kwale ndawo yokusebenza,
Isinyobo okanye iziqhamo zeshishini elibi zamkelwe,
Ngamana yonke into esiyenzayo inesidima kwaye ihloniphekile,
Sibiza into efanelekileyo kwaye sithanda abazalwana bethu,
Sincede siphumeze iinjongo ezibekiweyo zeshishini lethu nophuhliso lwezorhwebo.
Siyanicela nigxininise kuthi uthando lukaThixo,
Kwaye mayibe luthando lukaThixo kunye neentsapho zethu,
Abo basincedayo ukwenza umsebenzi obekekileyo,
Sikelela iingcinga zethu, isenzo kunye namazwi ethu,
Siyanicela ngegama loMsindisi wethu, Amen.
Ilizwi LikaThixo lisifundisa ukuba kufuneka siphumelele njengoko umphefumlo wethu uphumelela kwaye sifuna ubukumkani bukaThixo nobulungisa bakhe nayo yonke enye into iyongezwa, ke sijonga onke amandla ethu ukondla umoya wethu, ngale ndlela siqinisekisa ukuba impumelelo iyeza Endleleni ngoba uThixo uyathembisa.
Masithembe umthandazo kwaye sisebenze ukuze le nto siyicelayo ifikelele kuthi ngokukhawuleza.
Ngaba ungathandaza ngaphezu komthandazo onamandla womsebenzi weshishini kunye nokuninzi kuThixo nakuSt. Thadeus?
Into ebalulekileyo kukuba uthandaze unokholo oluninzi entliziyweni yakho.
Ukuba unokholo kwaye ukuba uyakholelwa ekubeni yonke into izakuphucuka ungathandaza ngaphandle kwengxaki.
Khumbula ukukholelwa nje ukuba yonke into iza kuphucuka!